INJIRTA DIGAAGGA: SIDA LOO DAGAALAMO, WAXA LAGA BAXAYO - BEERAHA DIGAAGA
Injirta iyo digaagga: waxa la sameeyo, sida loo tirtiro
Dheecaannada caadiga ah ee digaaga, gaar ahaan, digaagga waa injir, ama peroeda. Qalabka loo yaqaan 'ectoparasites' (oo loo yaqaan cayayaanka ku dul nool jidhka xayawaanka ama bini'aadamka) way adag tahay in la keeno. First of dhan, sababta oo ah halganka iyaga oo leh waxay u baahan tahay dulqaad, dulqaad iyo aqoon gaar ah.
Marka laga reebo khatarta
Qaar ka mid ah beeraleyda digaaga ayaa aaminsan in injirta digaagga aysan khatar ahayn. Dhab ahaan, bayaankaasi waa mid khalad ah.
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah cawaaqibyada keeni kara in ay jiritaanka ku dul-noolaashadaan shimbiraha gudaha:
injirta waxay qaadaan cudurrada faafa;
injirta waxay ku faafi kartaa digaagga leh Gooryaanka;
raaxo la'aanta joogtada ah ee cuncunka cuncunku wuxuu keeni karaa miisaan culus oo xitaa keena dhimasho;
xiriirka dheeraadka ah ee cayayaanka ayaa keenaya hoos u dhaca wax soo saarka ukunta iyo u nugulaanta cudurrada kala duwan.
Ma taqaanaa? Dhamaan daawooyinka injirta ah ayaa loo kala qaybiyaa iyadoo loo eegayo saameynteeda laba nooc: Waxyaabaha qaarkood sida cayayaanka, dadka kale waxay xannibaan helitaanka hawada (kerosene, benzene). Maaddooyinka nooca ugu horeeya waxay dilaan duleelka, saamaynaya habdhiska neerfaha, cirridka cayayaanka ee daroogada nooca labaad.
Halkee injirta laga soo qaataa digaagga
Qaar ka mid ah sababaha injirta u egyihiin digaagga gudaha waa:
xaaladaha aan caafimaad lahayn;
gudbinta dulinka dulinka ah ee shimbiraha duurjoogta ah;
xayawaanka duurjoogta ah iyo kuwa gudaha.
Cunnaanta lakabyada gudaha ee leh injirta way adagtahay in la ogaado, maadaama injirta aysan ka weynayn 0.5 cm. Horumarinta dulinka ka yimaada ukunta ilaa cayayaanka qaangaarka ah wuxuu soconayaa illaa 1 bilood.
Calaamadaha iyo koorsada cudurka
Waxaa jira calaamado iyo astaamo lagu ogaan karo marka digaaggu ku dhaco injirta.
sii kordhaya dareenka iyo walwalka shimbiraha;
digaaggu wuxuu bilaabmayaa inuu isku xoqo dhareerkiisa iyo jeexjeexiisa baco;
Shimbiraha ayaa leh boogo xaar ah;
digaaggu wuu badiyaa, hoos u dhaca cunnooyinka, hoos u dhaca wax soo saarka ukumaha;
digaagga iyo da 'yarta ayaa u dhinta.
Haddii aad aragto ugu yaraan mid ka mid ah astaamaha, waa inaad si taxaddar leh u eegtaa dhammaan shimbiraha si gooni ah u kala qaad qolka kale ee lagu qaado bakteeriyada. Tallaabada xigta waa inay ahaato daaweynta digaagga jiran.
Is barbar dhigo cudurrada digaaga, hababka daaweyntooda iyo daaweynta, iyo gaar ahaan coccidiosis, colibacteriosis, pasteurellosis iyo shuban, iyo sidoo kale hababka lagu xakameynayo cudurrada aan faafa ahayn.
Waxa aad ka bixi karto
Ectoparasites ee digaagga waxaa laga dhigi karaa macnaheedu kiimiko casri ah, iyo iyadoo la adeegsanayo hababka dadweynaha. Xaaladda ugu weyn ee guusha dhacdooyinka - sabir iyo dulqaad. Tallaabo hal mar ah oo lagu burburinayo dulin-falka maahan in laga dhigo mid guul leh.
Sidaa daraadeed, ha ahaato sida aad u go'aamineyso inaad u dhaqanto - adigoo u maraya guulaha warshadaha kiimikada casriga ah ama ka faa'iideysanaya waayo-aragnimada caanka ah, ugu horreyntii, waa inaad is-qabatid dulqaad.
Waa muhiim! Wixii digaaga, waa in la soo xushaa walxaha anti pazethroid ku salaysan. Kuwani waa dabiicado farabadan oo dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee pyrethrin, walax laga helo midabada reerka Astro. Falalka cayayaanka ayaa ku dhacaya injirta mana khatar ku ah xayawaanka.
Habka daaweynta ugu waxtar badan ee digaagga cudurka qaba. Daawooyinka sida caadiga ah loo isticmaalo ee saameeya nidaamka dareemayaasha ah ee dulin, iyada oo aan waxyeello u keenin shimbirta.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida iyo sida loo quudiyo digaagga guriga, sida loo diyaariyo quudinta digaagga iyo shimbiraha qaangaarka leh ee gacmahaaga, waxa la sameeyo haddii ay digaagga si fiican u qaadaan, digaagga iyo digaagga lagu hayn karo qol isku mid ah, ma u baahan tahay dabin .
Miisaaniyaddaas waxaa ka mid ah:
waxay ku dhacdaa "Neotman", "Frontline", "Leopard" iyo kuwo kale;
buufin loogu talagalay digaagga (sidoo kale daawooyinka loogu talagalay bini-aadamka ayaa loo isticmaalaa). Isticmaal ujeedada dhakhtarka, ka dib talooyinka. Tusaale ahaan: "Geth", "Nuda", iwm .;
waxaa loola jeedaa qolka qolka, tusaale ahaan "Karbofos". Si loo gaaro saameynta la rabay, waxaa lagama maarmaan ah in loo isticmaalo wakiilka dhulka, derbiyada iyo qoobka.
Insecticides waxay si gaar ah u dhaqmaan shakhsiyaadka qaan gaadhka ah, ma halis u yihiin ukumaha. Kuwaas oo dhan, 10-15 maalmood ka dib, injirta yar ayaa soo muuqan doonta, markaa waa inaad dib u daaweysaa shimbiraha iyo qolka ka dib 1-1.5 usbuuc.
Tallaabooyinka noocyada kala duwan ee daaweynta dadweynaha waxay ku salaysan yihiin isticmaalka "aromatherapy" iyo isticmaalka qashin-qubarro casri ah:
urta qoyaanka, chamomile iyo marigold cabsigelinta dulin. Waxa kale oo ay leedahay saameyn ciriiri ah injirta sida urta saliidaha lagama maarmaanka ah (orange, lavender);
bacriminta geedi socodka shimbiraha ee khalka, biyaha iyo kerosene (1: 1: 1);
isku dhafan oo caddaynaya waxtarkooda ma aha oo keliya in lagu shaqeeyo digaaga, laakiin sidoo kale digaag digaag: kerosene, benzene, ammonia (1: 1: 1).
Ma taqaanaa? Bilowgii qarnigii 20aad ee Gradenburg, ayaa nasiibku si toos ah ugu lug lahaa doorashada murugada. Musharixiinta tartanku waxay fadhiisteen jadwalka waxayna gashteen dharkooda. Bartamaha miiska wuxuu ahaa lafo. Doorashooyinka ayaa ku guuleystay musharaxa, kuwaas oo gadhkoodu yahay cayayaanka.
Baro wax badan oo ku saabsan sababta ay digaagadu u baxaan iyo sida loo kabo maryaha digaagga.
Maxaa aan sameynin
Markii hore, sumaddaas sida boodhka iyo suntu waxay caan ahaayeen. Waqtigaan, sababtoo ah sunta sare ee walxahan, ayaa isticmaalkooda loo yareeyo.
Maxaa aan sameynin marka la ogaado injirta digaaga:
ka dib markii la geynayo coop digaagga isla markiiba bilaabi shimbir halkaas. Waa in la nuugo ka dibna maydhaa;
ka ilaalinta sunta cayayaanka in ay soo galaan shimbirta. Tani waxay horseedi kartaa sunta shimbiraha;
u ogolow jiirka inay joogaan guriga hoyga, waxay noqon karaan kuwo sidayaal ah dulin;
isticmaalka sunta cayayaanka adigoon lagala tashanin dhakhtarka xoolaha iyo adigoon wax talooyin ah;
Isticmaal daawooyinka qaarkood si ay u dilaan dulinyada shimbiraha ka yar 1 bilood ka hor inta aan la gowraco.
Qofku ma qaadi karaa cudurka
Injirta jidhka digaaga waxay noqon kartaa sidayaal cudurro halis ah, sida:
Waxaan kugula talineynaa in aad barato nooca ugu weyn uguna badan ee digaagga.
Inkasta oo xiniinyaha shimbiruhu aanay ku noolayn bini'aadamka, waxay awoodaan in ay u qaadsiiyaan. Waxa kale oo aad ku qaadi kartaa qaadsiin adigoo cunaya cunto digaag leh. Dhammaan cudurrada kor ku xusan, sida qaar ka mid ah kuwa kale, oo ay ku qaadi karaan digaagga cudurka qaba, waxay halis u yihiin bini-aadanka. Mid ka mid ma aha in ay u malaynayso in ectoparasites ee digaagga ay halis u yihiin oo keliya shimbiraha.
Waa muhiim! Daaqa-cayayaanka lagu daweeyo digaagga ayaa laga saaraa guriga hargabka. Qolka waqtigan waxaa lagu daaweynayaa habab ku habboon. Ku soo celi shimbiraha ilaa meeshoodii ugu horreysay 15-20 maalmood. Ka hor inta aanad shimbiraha ugu shubin meeshii hore ee degaanka, waa in si fiican loo nadiifiyaa.
Habka ugu wanaagsan ee loola dagaalamo injirta waa in laga hortago inay muuqdaan. Si arrintan loo sameeyo, qaado tallaabooyinka kahortagga ah:
ciidda qashinka ah ee qashinka lagu rakibay;
hannaan digaag digaag leh biyo karkaraya;
Bixiyaan meel ku filan oo ku saabsan jiritaanka shimbirta, kartida ay u leedahay inay ku socoto hawada cusub;
Digaagga dhallinyarada waa in lagu daweeyo sunta cayayaanka;
si joogto ah u nadiifi coop digaaga, ka saar qashin, baalasha iyo hoos;
xaddid shimbirta sida ugu badan ee suurtogalka ah ula xiriiri shimbiraha duurjoogta ah iyo xayawaanka (oo ay ku jiraan kuwa gudaha);
samee kormeer joogta ah oo digaagga ah si joogta ah cudurka ectoparasites.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiso u leedahay akhrinta sida loo sameeyo coop buska, sida loo dhiso, sida ugu wanaagsan ee loo diiriyo digaaggu xilliga qaboobaha, iyo sidoo kale sida loo doorto loona isticmaalo gogosha hargabka digaagga.
Way sahlan tahay in waqti loo qaado tallaabooyinka ka hortagga ah marka loo eego habka qaadista waqtiga qaadashada daaweynta shimbiraha cudurka qaba. Ha ahaato mid jilicsan oo ku saabsan dhibaatada injirta digaaga, sababtoo ah dulin-biyoodku waxay noqon karaan kuwa cudurro aad u daran oo khatar gelin kara caafimaadka iyo mararka qaarkood xitaa nolosha aadanaha.
Haddii injirta dufanku dhibto, markaas waxaad ka iibsan kartaa xalka farmashiyaha Farmashiistaha. Ash daadinta leh ciid iyo digaagga ayaa ku duubi doona isku dhafkan, waxay kaa caawin doontaa in laga takhaluso injirta digaag xun. Buug-yaraha Bukaanka ayaa ku lifaaqan, kaliya ka taxaddar inaadan ku dhicin indhahaaga. Waxaa la naqshadeeyey oo lagu buufinayaa coop digaag iyo qashin digaag ah.
Injirtu ma ahan mid aad u fudud in laga takhaluso, si aad u iibsato injirta farmashiyaha si aad u dhaqdo digaagga, maaha in aad sifiiciso, si aad u daadiso lime, si aad ugu daadiso limeey cusub, si aad ugu darsato koloriin badan halkaas, si aad u bedesho qoobabka, buulada, gogosha, , ku maydh daawada qashinka lagu daro ciidda, sidaas darteed digaagga si joogto ah ayaa loo qubey, injirta oo ka soo kulul kuleyl aad u daran.
Maxaan ugu baahan nahay daboolka lo'da iyo waxa macnaheedu yahay marka ay mawjado tahay
Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan geraniums cad Dhamaanba ku saabsan ubaxa ugu caansan: sharax, sawir iyo aragti guud ee noocyada, beerashada
Sida loo isticmaalo "Kemifos" beerta: tilmaamaha isticmaalka
Waxyaabaha dhirta wax ku oolka ah waji leh: waa maxay ujeedada iyo sida loo kariyo guriga?
Suufaan canabka ah ayaa loo magacaabay sababtoo ah dhibaatada ay keento marka ay cunayaan canab. Snails ayaa la cunay taniyo wakhtiyadii hore, iyaga oo aan ka fekerin inay yihiin raaxo-darro, laakiin halkii ay ka soo horjeedaan, tan iyo markii ay heleen qaybo ka mid ah dadweynaha. Muuqaalka shufanka Jirka dabacsan ayaa ah, si qaylo leh u hadlaya, lugta weyn iyo madaxa. Read More
Sida loo abuuro cawska: Talooyin guud oo loogu talogalay inuu bannaanka u ah